SP-G09 200ml Beech Solid Wood Aromatherapy Mkpa mmanụ dị mkpa, China SP-G09 200ml Beech Solid Wood Aromatherapy Mkpa mmanụ ndị na - enye nsogbu dị iche iche, ndị na - eweta ya, ụlọ ọrụ - Sunpai Industries Limited.
SP-G09 200ml Beech Solid Wood Aromatherapy Mkpa mmanụ dị mkpa
200ml Beech Solid Wood Aromatherapy Mkpa mmanụ dị mkpa
IKPATARA EGO NA-EKWU NKWU: E wezụga ojiji a na-eme ọgwụ aromatherapy, mmanụ mmanụ a dị mkpa na-arụkwa ọrụ dị ka ihe na-eme mmiri. Jiri ya iji meziwanye ikuku ụlọ na ịdị mma nke ikuku, iji chebe gị ezinụlọ site na ikuku akọrọ, oke ikuku, allergens, ájá na ihe ndị ọzọ!
2.MONG LASTING MIST: diffuser na-abịa na mmiri 200ml nke ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ísì na-enweghị ire ọkụ na 2 MISTMATES ỌR:: Ọnọdụ na-aga n’ihu na-enye awa 10 nke akpukpo ọkụ dị egwu, Ọnọdụ Mgbapụta ((30 sek, 30 sek)) ) na -eme ka ihe ncha dị ala karịa awa iri abụọ.
Ọrụ 3.Quiet: Jiri teknụzụ ultrasonic, mmanụ ndị na-esi ísì ụtọ na-emepụta ure dị larịị na-aga n'ihu iji wedata ikuku na isi ụlọ. Isrụ ọrụ jiri nwayọọ rụọ ọrụ agaghị emetụta ogo ụra.
4.Safe & Auto-off: Udiri ísìsì mmanụ ndị a dị mkpa nwere ike ịdị ruo awa 5-10. Onye mmanụ dị mkpa ga - agbanyụla ọkụ na - akpaghị aka ga - apụ mgbe nchekwa mmiri ga - ejide maka nchekwa gị yana nchedo ndị na - esi ísì ụtọ.
ihe onwunwe Bamboo Fiber + Osisi ++ PP
ìhè Ọcha edo edo
SP-A07 800ml WIFI APP Njikwa Azụmaahịa Azụmaahịa